Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Dicas De Semalt: 8 Maneiras De Proteger Seu Сonteúdo
Ukuthola ukuthi othile webiwe okuqukethwe kwakho kwangempela kuyabuhlungu futhi kuyathukuthelisa. Ubhala ngokusekelwe olwazini olutholile ngomsebenzi noma isithakazelo somuntu siqu noma isikhathi esichitha ukucwaninga nokukhothoza emithonjeni ehlukahlukene. Khona-ke othile ufika futhi ubeka umsebenzi wakho kusayithi labo ngegama lawo ku-line. Bangase bathathe isikhathi sokushintsha noma ukuhlela kabusha amagama, kodwa ngokucacile umsebenzi wakho.
Ukuqonda ukubaluleka kokuvikela okuqukethwe kwakho, u-Andrew Dyhan, uchwepheshe we Semalt Amasevisi weDividal uchaza indlela onganciphisa ngayo amathuba okuba okuqukethwe kwakho.
Amathuluzi ahlukahlukene atholakalayo ukuze ahlole ngokuzenzakalelayo ukuhlunga. Lawa mathuluzi upheqa kwi-intanethi futhi ubuke izinto ezifana nolwazi lwezikhathi ukuze uhlole okuqukethwe okufakiwe. Bavame ukukhomba amagama athize asebiwe futhi ahlinzeke ngamaphesenti wezinto ezikhonjisiwe endaweni ethile yomsebenzi. Ungathola amathuluzi wamahhala futhi akhokhelwayo ngokumane ufune "umhloli wokuhlalisa" ku-injini yakho yokusesha.
AmaLayisense we-Creative Copyright
Kunezinhlobo eziyisithupha zelayisense zokulondoloza i-copyright. Zilawula ukuthi kungakanani okuqukethwe kwakho okungasetshenziswa, noma ngabe omunye umuntu osebenzisa okuqukethwe kwakho kufanele akunikezele, nokuthi ngabe ingasetshenziswa yini ngenhloso yokuthengisa noma cha. Uma usanda kuvula iwebhusayithi, ungase ufune ukuvumela ukusebenzisa okunye okuqukethwe kwakho ngeminye imikhawulo, ngoba umsebenzi wakho ovela kwamanye amasayithi ungadonsela abantu kusayithi lakho futhi uthuthukise ibhizinisi lakho. Yenza ucwaningo oluthile ngezinhlobo ezahlukene zelayisense zokulondoloza i-copyright bese ukhetha okuhambisana nesimo sakho samanje esingcono kakhulu.
Phakathi kwama-plugin amaningi atholakala ku-WordPress kukhona okuthiwa i-CopyProtect. Yenza nje lokho igama layo elikushoyo - livikela okuqukethwe kwakho kusukela ekugqanyisweni, okukopishiwe, futhi okunamathiselwe kwenye indawo. Kulula ukufaka futhi, ngokungafani namanye amathuluzi enza into efanayo, ngeke ithinte i-SEO yakho.
Vikela i-HTML yakho
Hamba ngaphesheya kokuvimbela ikhophi bese unamathisela ukweba kwezinto ezivela kusayithi lakho ngokuvikela ikhodi ngemuva kwesiza sakho. I-HTML Guard isofthiwe evimbela abaduni ekufinyeleleni ikhodi yakho yomthombo bese ukuyisebenzisa kwenye indawo.
Faka i-watermark yakho kukho konke okushicilelayo. Ngokwenza lokhu, noma yini ethathwe kusayithi lakho izoba negama lesayithi lakho elifakwe kuso.
Umthetho we-Digital Millennium Copyright Act ka-1998 uvumela ukubhaliswa ngokushintshanisa ikhono lokubeka ibheji lakho kuwebhusayithi yakho. Lezi zixwayiso zingaba amasela ukuthi umsebenzi wakho unelungelo lobunikazi futhi bangabika ngokuba.
Gcina Imidwebo Yomuntu Yonke Yonke
Lokhu kwenza kube lula ukufakazela ukuthi ungumbhali wangempela wemisebenzi eyebiwe. Njengokugcina amarekhodi amathenda, ukugcina okuvela kukho konke okufaka kukho kusayithi lakho kungangena kakhulu uma uhlangabezana nezinkinga phansi komgwaqo.
Uma othile eba okuqukethwe kwakho kusayithi lakho, babike ngokushesha ngangokunokwenzeka. Xhumana nomphathi wabo webmaster ngokushesha. Chaza ilayisense yakho yokudala kubo. Chaza i-copyright yakho. Uma behluleka ukususa okuqukethwe okubekiwe, babike ku-DMCA. Bazofinyelela ngokushesha kumenzi wephutha.
Akunakwenzeka ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wakho onzima ngeke ukopishwe, kodwa ngokulandela izinyathelo ezingenhla, unganciphisa amathuba okuba kwenzeke kuwe.